Dar Khane Din/International Day against Nuclear Tests | दर खाने दिन/विश्व आणविक परिक्षण विरुद्धको दिवस | २०७९ भदौ १३ | Hamro Patro
भदौ शुक्ल द्वितीया
दर खाने दिन/विश्व आणविक परिक्षण विरुद्धको दिवस ( Dar Khane Din/International Day against Nuclear Tests )
दर खाने दिन | अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस | विश्व फिजियोथेरापी दिवस
दर खाने दिन विशेष अडियो सामग्री
नेपाल यतिखेर तीजमय छ । विश्वभर नेपाली जहाँ जहाँ छन् तीजमय माहौल बनाएर बसेका छन् कि कसो दिदी बहिनीहरू ? टिभी रेडियोमा आएका तीजाम्य गीत, पत्रपत्रिकाका तीजाम्य शुभकामना, सामाजिक सञ्जालका तीजाम्य अनुभूतिका संगालो अनि बाटा–घाटामा राताम्य तीजाम्य सजावट अनि सौन्दर्य, तीजले नछोएको कहाँ छ र ?
तीजलाई कठोर व्रत भन्दा पनि समर्पणका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । आउनुहोस् आज बात मारौँ, दर खाने दिनबारे । हुन त, आजभोलि तीजको दर तीजभन्दा महिनौँ अघिबाटै शुरु भइसकेको हुन्छ, दर । तथापि परम्परागत रूपमा तीजको एकदिन अगाडि वास्तविक दर खाने चलन छ ।
शताब्दीऔँदेखि महिलाहरूको शौभाग्यका लागि बसिने यो तीजका आयाम आजभोलि समयसँगै आधुनिक हुँदै गएको छ । महिनौ अगाडिदेखि दरखाने चलन, तडक–भडक र सामाजिकीकरणको नाममा अतिरञ्जित गर्दै भड्किलो संस्कार र चलनहरू हामीले देख्दै आएका छौँ । तीजलाई विशुद्ध सरल अनि महत्वपूर्ण चाडका रूपमा मात्र लिइनु जरुरी छ । यो चाडलाई गरिब–धनी सबैको पहुँचमा हुने गरी मनाइनु जरुरी छ । अर्कोतर्फ गर्मीको मौसम छ । स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल गर्नु नै छ । धेरै चिल्लो–पिरो खानेकुरा, गरिष्ट र तामसी भोजनका अधिकतम सेवनले थप बिरामी गराउन सक्छ । तसर्थ, दर खाने क्रममा यसमा धेरै ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ ।
निराहार तथा निर्जला रही तीज मनाउँदा फल प्राप्त गरिन्छ । अविवाहिताका लागि असल पति र विवाहिताका पति अनि परिवारको स्वास्थ्य एक दिनको तीजले मात्र नभई वर्षभरिको समन्वय, समझदारी र सहकार्यले, एक–अर्काप्रतिको समर्पण, सम्मानले मात्र निर्धारण गर्नसक्छ । यस दिन पुरुषहरूको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ, आमा, दिदी–बहिनी अनि पत्नीको यो सहृदयताका लागि । पुरुषले पनि जिम्मेवारी उठाउन जरुरी छ । आजका दिन उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै अनि ख्याल गरेर असल सहयात्रीको भूमिका निभाउन जरुरी छ । तपाईं अविवाहित पुरुष हुनुहुन्छ भने के थाहा तपाईंका लागि पनि कोही कतै भोलि व्रत बस्नेवाला हुनुहुन्छ कि ?
भोलिको कठिन तीजको व्रतलाई आजको दरले भ्याउनुपर्ने हुन्छ । किनभने भोलिको व्रत केवल व्रतमात्र नभई दिनभरिको नाचगान, कुराकानी, पूजापाठ अनि रमाइलो पनि हो । यसरी नारीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर रमाइलो गर्दै मध्यरातमा बसेर मीठा–मीठा परिकारहरू खाने चलन नै दर हो ।
दरको कुरा गर्दा सामान्यतया पकवानहरूमा ढकने, आलुदम, आलु–कवाफ, दूध, कुरौनी, फलफूल, मिठाई लगायतका अडिला कुराहरू सेवन गर्ने चलन छ । अझ विवाहित चेलीका लागि त दरको महत्व वास्तवमै अगाढ स्नेहमयी हुन्छ । माइतीको निम्तोमा दर खान पुगेका चेलीहरू आजको दिन आमा, हजुर या भाउजुहरूको स्नेहमा लुटपुटिँदै उपरखुट्टी लगाएर घरको कुनै सुर्ता नराखी खाने, रमाउने चलन छ ।
तीजमा माइत जाने लालसा, नयाँ सारी लाउने चाहना, गाउने गीतका भाका अनि अविवाहित महिलाहरूका लागि भनेजस्तो राम्रो जीवन साथी पाउँ भन्ने अघोषित वरदानहरू तीजका सर्वमान्य तथ्यहरू हुन् । दर खाने दिनका याद गर्दै माइत जान नपाएका चेलीहरूको वेदना पनि गहभरि आँशुसँगै पोखिन्छ छताछुल्ल, कहिले गीतमा त कहिले प्रीतमा ।
यस्ता कैयन भाकाहरू छन्, जसलाई लैबरीको भाकामा तिजाम्य वेदना पोख्न प्रयोग गरिन्छ–शदियौँदेखि नेपाली समाजमा ।
यसपाला बाढी–पहिरोले कतिपय चेलीका घरहरू अनि धेरैका माइतहरू बगाएको छ, अनि सँगसँगै तिनीहरूको सपना र आकांक्षाहरू पनि । बग्दै गरेका दराजका पल्ला अनि ट्याङ्कीभित्र बगेका राता सारी अनि गहनाहरू पानीको भेलले कता पुर्याए कता ? तीजको यो लहर यो वर्ष सबैतिर समान छैन । यता नाचगान हुँदै गर्दा उता रुवावासी हुँदैछन् । यता सारीको सप्कोले नाचेर फर्किएपछिको पसिना पुछ्दै गर्दा उता सारीका सप्कोले आँशु पुछिरहिनेछ । मीठा पकवानमा र सङ्गीतमा झुमेका यताका दरहरू उता चुर्लुम्म डुबेको दैनिकिमा चिउरा दालमोठसँग मेल नखान सक्छन् । यसपालिको तीजमा एक अर्काको दुःख बाँड्ने र सुख साँट्ने साझा थलोको निर्माण गरौँ ।
तीज एउटा संस्कारमात्र नभई सभ्यता हो । हेर्नेले यसलाई नारीवादी चाडका रूपमा हेर्ने गर्छन् । तर आँखाका डिल अनि मनका भित्ता खोलेर हेर्ने हो भने तीज नारी र पुरुषको समानता अनि लैगिंक समानताको उत्साह पनि हो । आमा, छोरी, बुहारी, सासु, आमाजु, दिदी, बहिनी लगायत सम्पूर्ण महिला नातागोताहरूको साझा चौतारीका रूपमा तीजलाई लिन सकिन्छ ।
वैदिक हिन्दू सनातन परम्परा, संस्कार तथा महिला सौभाग्यको प्रतिक स्वरूप रातो सारी, छड्के तिलहरी, लगनको पोते लगायतका गरगहना र वस्त्रादी पहिरिएर तीजको दिनमा निराहार व्रत लिएर मठ मन्दिर, टोल छिमेकमा भेला भई नाचगान गर्दै रमाइलो गर्ने चलन रहिआएको छ ।
जे होस् आज दर खाने दिनको हामी सबैलाई मुरी–मुरी शुभकामना । हामी सबै जनाको परिवारको सु–स्वास्थ्य र दीर्घायू कायम होस् । अनि भनेजस्तो जीवन–साथी पाइयोस् अनि सम्पूर्ण दिदी–बहिनीहरूको शौभाग्य अटल रहोस् ।
एकफेर यसो परिकल्पना गरौं । यदि हामीले अक्षर कोर्न नजान्ने भएको भए, संसार कति अफ्ठेरो हुन्थ्यो होला । यी अक्षर, कथा, कविता, पैसा, सूचना लगायत केही पनि बुझ्न सकिने थिएन । आधुनिक विश्वमा शिक्षा अनि साक्षरतालाई आधारभूत मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरिए तापनि विश्वभरि लगभग ७७ करोडभन्दा बढी मानिस सामान्य लेखपढ गर्ने सीप नभएका भन्ने स्पष्ट तथ्य अध्ययनहरूले देखाउँछ । हाम्रा छेउछाउमा बसोबास गरिरहेका हरेक उमेर समूहका कोही न कोही असाक्षर सजिलै भेटिन्छन् ।
सामान्य अक्षर चिनेर लेखपढ गर्न र अङ्कहरू अनि सामान्य हिसाब बुझ्न पाउनु सबैको मौलिक अधिकार हो । तथापि यी कुराहरू कागजका पानाहरूबाट बाहिर आएर वास्तविक जीवनशैलीमा साकार भएर आउन जरुरी छ ।
साक्षरतासम्बन्धी ग्लोवल मनिटरिङ््ग रिपोर्टका अनुसार, संसारका प्रत्येक ५ मध्ये एक जना पुरुष र दुई तिहाई महिलाहरू अझै पनि असाक्षर छन । अझ धेरैको अत्यन्त न्यूनस्तरको साक्षरता सीपहरू छन् । धेरै जना बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय जान पाउँदैनन् । अनि पाउनेहरू पनि दैनिक विद्यालय जान सक्दैनन् । पश्चिमी र दक्षिणी एसिया लगायतका देशहरू साक्षरता दरमा अझै कमजोर देखिन्छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष नेपाल समेत विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । केही विद्यालयले अनलाइन कक्षामार्फत विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छन् भने धेरैजसो विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प छ । डिजिटल शिक्षामा त्यति धेरै अघि नहुँदा नेपालका धेरै विद्यार्थीहरूले यो महामारीका कारण शिक्षाबाट टाढै रहनु परेको छ । हाम्रो संसारबाट यो भाइरस चाँडै हटेर जाओस् । विद्यालय फेरि संचालन हुन् । पठनपाठन छिट्टै शुरु होस् । हाम्रो कामना ।
सेप्टेम्बर ८, अर्थात् विश्व साक्षरता दिवस । सन् १९६५ मा युनेस्कोले हरेक वर्षको सेप्टेम्बर ८ लाई विश्व साक्षरता दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । विश्वभरिका विद्यालय, समुदाय र संस्थाहरूले साक्षरताका लागि जनजागरण फैलाउन यो दिवस विभिन्न तरिकाले स्वःस्फूर्त रूपमा मनाउने गर्छन् । सबै जना साक्षर हुनु सबैजनाको दायित्व हो । नेपालको परिपेक्ष्यमा डिजिटल युग अनि त्यसको उपयोगिताको प्रयोग गरेर डिजिटल शिक्षा अनि साक्षरताका लागि जनजागरण अझै अपुग्दो छ ।
'Literacy forahuman–centred recovery : Narrowing the digital divide' भन्ने नाराका साथ सन् २०२१ को साक्षरता दिवस विश्वभर मनाइँदैछ । मानवकेन्द्रित पहुँचलाई ध्यानमा राखेर डिजिटल पहुँचलाई समान राख्न यस वर्ष पैरवी गरिएको छ । कोभिड–१९ को विनाशलाई सुधार गर्न साक्षरता पनि एउटा हतियार हो ।
हात–हातमा भएका मोवाइल अनि घरघरका इन्टरनेटहरू शिक्षा र साक्षरता भन्दा पनि नचाहिँदा सञ्चार अनि समय व्यतित गर्ने फजुल माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन । लेखिने अक्षरहरू र अंकहरूको महत्व एकदमै धेरै र अतुलनीय छ । विकसित समाजको परिकल्पना यी अक्षर र अङ्क हरूसँग सबैजना मानवको परिचय नगराइकन सम्भव पक्कै पनि छैन । साक्षरताले मानवको परिचय र उसको संस्कारलाई अझै वृद्धि गर्छ । अक्षर र अङ्कको महत्व अनि शिक्षाको उज्यालो मानवका लागि एकदमै जरुरी छ । आज यदि हामीमा अक्षरको ज्ञान नभएको भए लेख्नेले लेख्न र पढ्नले पढ्न नसक्ने भए यो साक्षरता दिवसको पृष्ठभूमि हाम्रो पात्रोमा न त लेखिने थियो न पढिने थियो । अक्षरले भावना र जानकारी दर्शाउँछ र अङ्कले तथ्य अनि सम्बन्ध दर्शाउँछ ।
नेपालमा पौढ शिक्षालगायतका कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिन जरुरी छ, किनभने चाहे बालक होस या वृद्ध, शिक्षा सबैलाई जरुरी छ ।
खरिपाटी अनि धुलेपाटीमा अक्षर कोरेर अक्षर उक्काउन जानेकादेखि कालोपाटी अनि स्लेटसम्म प्रयोग गरेका पुस्ताहरू हामीसँग छन् । भित्तामा झुण्ड्याएका चार्टमा ‘क’ बाट कछुवा पढेकादेखि कम्प्युटरमा अक्षर चिनेका पुस्तासम्म नेपाली समाजले देखेको छ । तर फेरि पढ्न नजानेका अनि विद्यालय जानसम्म धौ–धौ पुस्ताहरू लगायत अक्षर नै नचिन्ने अनि औँठाछाप लगाउनुपर्ने ब्यक्तिहरू पनि यही समाजमा छौँ ।
उनीहरूलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट के गरी साक्षरसम्म बनाउन सक्छौ । चाहे अक्षर–मालाका पुस्तकहरू पढाएर या निःशुल्क दैनिक पढाइदिएर वा पढ्ने वातावरण श्रृजना गरेर स्कुलसम्म उनीहरूलाई पु¥याइदिएर नै हुनसक्छ । सबैलाई साक्षर बनाउनु सबैको दायित्व हो । साक्षरताप्रति सबैको दायित्ववोध होस्, ‘शिक्षा धनं सर्वप्रधानम्’ ।
मानिसका प्राथमिक क्षमता अनि पहिचान एउटा महत्वपूर्ण दक्षतामा अडेको छ । त्यो दक्षता हो, मानवको गतिशीलता । गतिशीलताले नै मानिसलाई यहाँबाट उहाँ पु¥याउँछ । सपना अनि जानकारी दिलाउँछ । मानिस–मानिसबीचका सम्बन्ध स्थापित गर्छ, अनि मानिसलाई सामाजिक बनाउँछ, हैन र ?
विभिन्न मांशपेशीजन्य समस्या, हाडको समस्या अनि कुँजोपनाले मानवलाई गतिशीलताको यो दक्षता र अभ्यासबाट विमुख गर्न सक्छ । यही गतिशीलतालाई कायम राख्न फिजियोथेरापिस्टहरूको सीप अनि अध्ययन आवश्यकता पर्छ । यसै आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हरेक वर्षको सेप्टेम्बर–८ मा विश्व फिजियोथेरापी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ्र ।
सन् १८१३ मा स्वीस जिम्न्यास्ट हेनरिक लिंगले रोयल इन्टिच्यूट अफ जिम्न्यास्ट खोलेर गरेका हुन् । त्यस संस्थाले विश्वमै सर्वप्रथम गतिशीलता र पीडा निवारणका लागि मसाज अर्थात् मालिस, सुधारात्मक व्यायम अनि अन्य कसरतहरूको शुरुवात गरेको हो ।
त्यसपछि सन् १८९४ मा बेलायतमा चार्टड सोसाइटी अफ फिजियोथेरापी खोलेको पाइन्छ । फिजियोथेरापीको पहिलो कलेज भने अमेरिकाको वासिङटनमा वाल्टर रीड आर्मी अस्पतालमा भएको हो । प्रथम विश्वयुद्धताका यस अस्पतालमा फिजियोथेरापी शाखाको शुरुवात भएको हो ।
नेपालमा भने फिजियोथेरापीको इतिहास कोट्याउँदा नयाँ चिकित्सा पद्धतिका रूपमा केही दशक अघिमात्र केही निजी अस्पतालहरूले औपचारिक शुरुवात गरेको पाइन्छ । विस्तारै अब फिजियोथेरापीका सेवाग्राही र प्रदायकहरू बढ्दै गएका छन् । सन् १९८० को दशकमा सैनिक अस्पताल, कुष्ठरोग निवारक उपचार पद्धति अनि केही भारतबाट तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीमार्फत फिजियोथेरापी गरिने पाइन्छ ।
सन् १९८३ मा आईओएमले फिजियोथेरापीलाई एसएलसीपछिको ३० महिने कोर्सका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको हो । यस क्रममा सन् १९९० सम्म करिब ५० जनाले तालिम लिएको इतिहास हामीले पायौ । तर पुन सन् १९९० मा फिजियोथेरापी अध्यापन नेपालमा बन्द हुन गयो । तथापि विभिन्न अनौपचारिक तालिम र कार्यगत प्रशिक्षण भएको थियो । सन् २००२ पछि धुलिखेल मेडिल इन्स्टिच्यूटले फिजियोथेरापीलाई औपचारिक शुरु गरेको पाइन्छ । यसपछि क्रमशः नेपालमा पनि यो कोर्स अनि सेवाप्रदायक बढ्दै गएका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् विसं २०६३ पछि अंगभंग र घाइते सैन्यदस्ताको पुर्नवास र पूर्नस्थापनाका लागि सैनिक क्याम्प अनि अस्पतालहरूमा फिजियोथेरापीको प्रयोग अत्यधिक गरिएको पाइन्छ । ‘नेप्टा’ नामको नेपाली फिजियोथेरापिस्टहरूको पेशागत संगठन बनेको छ । फिजियोथेरापी आफैँमा उपचार पद्धतिको मेरुदण्ड हो । आजभोलि झन् अस्तव्यस्त जीवनशैली अनि निरन्तर कम्प्यूटर र मोवाइल प्रयोग गर्दाको अवस्थिति नमिल्नाले ढाड अनि गर्दनको दुखाई सामान्य र सबैभन्दा दोहोरिने पीडा भइसकेको छ, हैन र ?
अंगभंग, अंग काट्नुपर्ने, दुर्घटनाको चोटपछि लगायत अन्य विभिन्न प्रक्रियामा फिजियोथेरापी अत्यावश्यक छ योगाभ्यासलाई पनि यहाँ फिजियोथेरापीसँग जोड्न चाह्यौँ । आर्युवेदले आहार र विहारलाई समान प्राथमिकता दिएको छ । योगाभ्यासहरू पनि परिस्कृत फिजियोथेरापीका आधारहरू हुन् । पतन्जली र धनवन्तरीका पुस्तक अनि अध्ययनहरूमा स्वस्थ रहन योगासनहरूको चर्चा पाइन्छ ।
गतिशीलता नै जीवन हो, स्वास्थ्यको ख्याल राखौँ ।
फिजियोथेरापिस्ट र सेवाग्राहीहरू सबैलाई शुभकामना !
हाम्रो पात्रोका लागि सुयोग ढकालद्वारा तयार आलेख ।